बिजुलीलाई प्राथमिकता दिए कसो होला? | Pardesh ko Chautari Baata (परदेशकाे चाैतारी बाट)
बिजुलीलाई प्राथमिकता दिए कसो होला?
अगस्ट 12, 2008 at 12:00 बिहान टिप्पणी छोड्नुहोस्	सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउन ६ सय ८० मेगावाट बिजुली भए पुग्छ । त्यति बिजुली उत्पादन गर्न ८० अर्ब रुपैया भए पुग्छ । यो खर्च ग्यास र मट्टीतेल विस्थापन गरेको पाच वर्षभित्र उठ्छ । यो तथ्य हो- त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका प्राध्यापक अमृत नकर्मीको ।
सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि वर्षो १४ अर्ब रुपैया बाहिरिने गरेको छ । आफ्नो देशमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सके आयातीत पेट्रोलियममाथि परनिर्भरता अन्त्य हुने नकर्मीले ठोकुवा गरेका छन् ।
नकर्मीका अनुसार निजी क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष ९ अर्ब रुपैया बराबरको मट्टीतेल खपत हुने गरेको छ ।
त्यस्तै ५ अर्ब रुपैया बराबरको ग्यास खपत हुन्छ । मट्टीतेललाई मात्र बिजुलीमा परिवर्तन गर्ने हो भने ३ सय ८० मेगावाट भए पुग्छ । ३ सय १० मेगावाट बराबरको जलविद्युत् बनाउने हो भने ग्यास आयात गर्नु नपर्ने नकर्मीको अध्ययनले देखाएको छ ।
‘जलविद्युत्बाट खाना पकाउने हो भने १४ अर्ब आफ्‍नै देशभित्र रहन्छ,’ ऊर्जा संकटबारे युवा इन्जिनियरहरूको संस्था टिम नेपालले शनिबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा नकर्मीले भने- ‘हामीसग नभएको चीजको खपत बढी गरिरहेका छौं ।’
सहरी क्षेत्रमा खाना पकाउनका लागि गत वर्ष १ करोड ६० लाख केजी ग्यास भित्रिएको थियो, त्यस्तै ३० करोड लिटर बराबरको मट्टीतेल आयात भएको थियो । नकर्मीका अनुसार वैदेशिक व्यापारबाट देशलाई प्राप्त कुल आम्दानी ६२ अर्ब रुपैया मध्ये पेट्रोलियम खपतमा मात्रै ५३ प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ ।
विश्वव्यापी रूपमा पेट्रोलियमको भाउ बढेका कारण मट्टीतेल र ग्यासभन्दा बिजुली सस्तो पर्न गएको नकर्मीले औंल्याए । उनका अनुसार ११ वर्षघि सहरी क्षेत्रका एक परिवारलाई महिनाभरि भात पकाउन मट्टीतेलमा १ सय ८० रुपैया लाग्थ्यो, अहिले एक हजार ९० रुपैया पर्ने गरेको थियो । त्यो बेला बिजुलीबाट भात पकाउन मासिक ६ सय पाच रुपैया लाग्थ्यो, अहिले ७ सय ८८ रुपैया पर्छ ।
यसअनुसार एघार वर्षघि मट्टीतेलभन्दा बिजुलीमा भात पकाउन मासिक तीन गुना महगो थियो । अहिले बिजुलीभन्दा मट्टीतेल ३ सय दुइ रुपैयाले सस्तो पर्छ । त्यतिखेर एक ब्यारेल तेलको मूल्य १८ अमेरिकी डलर थियो भने अहिले १४६ डलरसम्म पुगेको छ । ‘यो अवधिमा पेट्रोलमा ८ सय प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ र प्रतिब्यारेल २ सय अमेरिकी डलरसम्म पुग्नेछ ।’
सरकारले समय-समयमा अन्‍तराष्‍ट्रीय मूल्यअनुसार पेट्रोलियमको भाउ समायोजन नगर्दा यस्तो संकट उत्पन्न भएको बताए । भारत र चीनमा समयमै समायोजन हुने हुनाले त्यहा तेलको हाहाकार कहिल्यै नपर्ने उनले उदाहरण पनि दिए । यहा पेट्रोलियम खपत वृद्धिदर वर्षो १२ प्रतिशत छ । तेल बढी खाने सवारी साधनको आयात गत वर्षो भन्दा ४० प्रतिशतले बढेको छ ।
Entry filed under: आफनै कुरा, Nepal. Tags: .	Perseid Meteor Shower 2008 Don’t miss it again	Software Engineer and his wife	जवाफ लेख्नुहोस् जवाफ रद्द गर्नुहोस्	Enter your comment here...